I-Connection broker: kuyini? Ingabe kukhona i-linux? | Kusuka kuLinux
Isaka | | Aplicaciones, I-GNU / Linux, Amanethiwekhi / Amaseva
Mhlawumbe uzwile ngalolu hlobo lwesoftware. Kepha ... yini i- uxhumano broker? Ngokuyinhloko iyi-software esebenza njengomxhumanisi phakathi kwabasebenzisi nezinsizakusebenza, noma ngabe ziyinto ebonakalayo noma ebonakalayo. Imvamisa, lezi zinhlobo zezinsizakusebenza ezifinyelelwe zitholakala efwini, okungukuthi, ezigcinwe esikhungweni sedatha futhi ikhasimende lale sevisi lidinga ukufinyelela kulezi zinsiza kude.
Kukhona abanye abasebenza ngokuxhuma abasebenza kuphela imisebenzi ye i-desktop virtualization (VDI) futhi akukho okunye, abanye banikela abanye ukusebenza ngale kwalokho. Isibonelo, ezinye zalezo ezihambisana ne-Linux, njenge-UDS Enterprise, zingakunikeza amathuluzi ukuze abasebenzisi abakude noma amaqembu akwazi ukufinyelela kulezi zinsizakusebenza futhi achaze nokuthi bayoba namalungelo amade kangakanani noma malini lapho bexhaphaza lezo zinsiza. Futhi, nge-UDS Enterprise unganquma i-OS yedeskithophu ebonakalayo lapho umsebenzisi ngamunye azokwazi ukufinyelela khona, kanye nokuthatha isinqumo sokuthi ngabe ukuxhumana kuzokwenziwa kusetshenziswa umthetho olandelwayo noma omunye, nokuthi kuzosetshenziswa isistimu yokuqinisekisa. Futhi awukwazi ukuhlinzeka nokuphatha i-VDI kuphela, kepha futhi nokuhambisa ukuphathwa okuphakathi nendawo nokuphathwa kwe- i-application virtualization (vApp), ucingo, amakhamera we-IP, njll. Ngakho-ke, inikeza ukuguquguquka okukhulu ekulungiseleleni ukuthi lezi zinsiza ezikude zizoxhashazwa kanjani.
Abanye abathengisi bokuxhuma ezinye izindlela ozozithola emakethe yiCitrix XenDesktop, i-VMWare Horizon View, iDell vWorkspace, njll. Ibhizinisi le-UDS, ongunjiniyela waseSpain futhi okhululekile ngokuphelele (ngaphandle kokuxhaswa), uma kuqhathaniswa nezinkulungwane zama-euro kweminye imikhiqizo efanayo. Kodwa-ke, uma ufuna ukwesekwa, banensizakalo ekhokhelwayo yakho. Ukonga okubalulekile okungaba umfutho omkhulu ebhizinisini lakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Connection broker: kuyini? Ingabe kukhona i-linux?
Uhlobo olusha lwe-Deepin 15.10 lufika ne-KWin nokuningi
Uhlobo olusha lweParrot 4.6 lufika neKernel 4.19, abashayeli abavuselelwe nokuningi